Voasambotry ny polisy teny Andravoahangy : mampiasa sabatra sy sakay ilay mpanendaka raindahiny | NewsMada
Voasambotry ny polisy teny Andravoahangy : mampiasa sabatra sy sakay ilay mpanendaka raindahiny
Tra-tehaky ny polisy avy ao amin’ny boriborintany fa­havalo, ny alarobia teo tokony ho tamin’ny 11 ora sy sasany alina ny jiolahy iray avy nanendaka. Vaky nandositra anefa ireo andian-jiolahy vao nahita ireo mpitandro filaminana. «Nitondra moto ny iray tamin’izy ireo ka io no tra-tehaky ny polisy raha tafaporitsaka kosa ny namany», hoy ny fanazavan’ny polisim-pi­renena, loharanom-baovao. Fan­tatra fa avy nanendaka mpivady tetsy Manjakaray tamin’ny moto izy sy ny na­many. Niaraka tamin’ny fitaovam-piadina toy ny sabatra sy ny sakay. Ireo fitaovam-piadiana voatanisa kosa, lasan’
ireo namany tafatsoka, hoy hatrany ny fanazavana voaray. Naman’ny jiolahy atao hoe Raleva ilay olon-dratsy ary nambarany ny misy azy. Raikitra, araka izany, ny fitadiavana ilay jiolahy ka tratra teny Andravoahangy ambony, ny alakamisy teo tokony ho tamin’ny 02 ora sy 30 mn ralehilahy. Mbola tratra niaraka tamina moto halatra ihany koa izy. Voalaza fa isan’ireo andian-jiolahy mpanendaka miaraka amin’ny sabatra eny Manjakaray i Raleva sy ny namany. Manana fitoriana azy avy avokoa ny polisin’ny boriborintany miisa telo. Isan’ izany ny kaomisarian’ny boriborintany fahatelo, fahenina ary fahavalo miampy ny SUT eny Tsaralalana.
Ankoatra izay, voasambotra ihany koa ny tovolahy iray 21 taona mpanendaka sady mpangaron-paosy eny Nani­sana. Fantatra ihany koa fa mpifoka rongony 11 isa voasambotry ny polisy teny Man­jakaray, ny herinandro lasa teo. «Izao no atao dia hoentina miady amin’ireo asan-jiolahy eny amin’ny faritra Manjakaray sy ny manodidina iny», hoy hatrany ny polisim-pirenena.